Oku kuyakwenza ukuba ube lula, Sebenzisa isiXhobo sokuFumaneka
Jonga uMlingo wamaqhosha ama-3 Ukukhula kweshishini lakho. Ndinike umzuzu omnye, ndiya kukunika ukukhula kobomi bonke, wenze uvavanyo.
Wakho! Yenza uvavanyo kunye nokufikeleleka kovavanyo ekukhuleni kwakho: -
Vula WebAccessibilityTool.com iwebhusayithi kuba le webhusayithi isebenzisa esi sixhobo.
Jonga i icon yeAtoall.com .
WebAccessibilityTool.com yiwebhusayithi enkulu, ukuba yenziwe ngokupheleleyo ivuliwe, emva koko uvule isithuba esitsha.
Cinezela kwithebhu entsha ppooii.com okanye llkkjj.com. Esi sisixhobo esahlukileyo.
Uya kubona WebAccessibilityTool.com kwakhona kwaye wothukile.
Oku kulula ukusebenzisa ukhetho onokulusebenzisa nakwiwebhusayithi yakho. Fumana le khowudi kuAtoall.com kwaye uyincamathisele kwiwebhusayithi yakho ukuze isebenze.
Olona lawulo lukhulu lukaRhulumente kunye nezeMfundo lusebenzisa le nto.
Kufuneka uyazi yonke iGama lakho loLwimi kulwimi olu-1, kwiLwimi zeeLwimi ezingama-200.
Yandisa ishishini lakho, wenze uvavanyo.
Cola isixhobo sokufikelela kwiwebhu yeAtoall.com kwiiwebhusayithi zakho ngoku.
Ayinamsebenzi ukuba iwebhusayithi yakho incinci okanye inkulu njenge-Bing, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Yahoo, Baidu, Apple, njl njl.
Kuya kufuneka uyazi izibonelelo ezili-10 zesixhobo esikhethekileyo sobugcisa ekukhuleni kwakho kwexesha lobomi. Yenza uvavanyo.
Oku kuya kukwenza inyathelo eli-1 ngaphambili ekufumanekeni kwewebhusayithi ekukhuleni kwakho.
Iiwebhusayithi zikarhulumente ezinkulu zifumana izibonelelo ezilungileyo kwitekhnoloji entsha.
Oku kuyakwenza ukuba ufikeleleke kwisigidi esi-1 sikhubazekile emhlabeni ekukhuleni kwakho.
Oku kuyakwenza ukuba ube nobuhlobo kubantu bengingqi ezi-2 zebhiliyoni kwihlabathi.
Oku kuyakwenza ukuba kube lula kubantu beelwimi ezingama-200 kwihlabathi ukuphuculwa kwakho.
Eli lixesha eli-5 ngokulula lokuchwetheza kuzo zonke izizinda eziza kuba luncedo kubo bonke.
Oku kuyakwenza ukuba ufumaneke kwizigidi zeMusic Dystrophy emhlabeni ukuba zikhule
Oku kuyakwenza ukuba uvulele i-1 billion yezixhobo ezilula zekhompyuter, iicomputer, umnatha wesantya sokugcina ukukhula / ukukhula
Oku kuyakwenza ukuba ufikeleleke ngakumbi kubantu abakhulileyo be-1 bhiliyoni lokukhulisa ukukhula.
Oku kuyakwenza ukuba, ubomi bakho buvuleleke kwiindawo ezisemaphandleni kwihlabathi ukukhula kweshishini.
Kutheni le nto ibalulekile kwishishini lakho nemali?
Ekuqaleni! kuya kufuneka wenze uvavanyo, nceda. Esi sisixhobo sokufikelela kubasebenzisi abakhubazekileyo, isixhobo solwimi kubantu abaziibhiliyoni ezi-2, kulula ukufikelela kuluntu jikelele.
Izikhokelo zokufikelela kumxholo wewebhu i-WCGA kufuneka ngenxa yezikhokelo zikaRhulumente, amalungelo abantu, amalungelo olwimi, amalungelo okufikelela. Ziyeke iinyembezi zokuphoxeka ngenxa yokusebenzisa i-surf. Yiloo nto iiwebhusayithi zikarhulumente zisebenzisa le nto.
I Abasebenzisi bayakufumana iphepha lewebhu ngoncedo lomnye umsebenzisi wedwa kube kanye. kwakhona. Ngoku unakho ukujonga iwebhusayithi enye ngaphandle koncedo.
Ukuba amaqhosha akwimigca ngoku kulula kakhulu ukuwachwetheza, umzekelo, ppooii.com, llkkjj.com, njl. ngoncedo lweThumb, umnwe wokuqala, nawuphi na umnwe, nangayiphi na intonga, ngesinqe, esinqeni, kunyawo, isithupha sonyawo, njl. njl. , ekunene ngasekhohlo, kabini.)
Ungasisebenzisa njani isiXhobo sokuFikeleleka kwiWebhu kwisiTayile seMpumelelo?
Ndinike imizuzu eli-10 ndiza kukunika idayimani empumelelweni. com kwibhrawuza yakho.
Ikopi eyahlukileyo ikhowudi , khetha ukusuka kubungakanani obukhulu.
Ngoku ncamathisela kwikhowudi entsha kwiwebhusayithi yakho kwithegi yomzimba okanye useto.
Ngoku layisha kwiseva kwikhowudi entsha kunye neengqungquthela.
Mhle! yiyo loo nto, ngoku ungajonga itekhnoloji kwiwebhusayithi yakho.
Vula iwebhusayithi yakho kwisikhangeli.
Ngoku vula ithebhu entsha yesikhangeli.
Chwetheza ibha yedilesi kwicebo elitsha ppooii.com. Uya konwaba.
Ungachwetheza kwi-bar bar yedilesi izihlandlo ezi-3 kabini, umzekelo, ooiiuu.com okanye llkkjj.com okanye mmnnbb.com.
Ezi zitshixo ezi-3 kumgca kwikhibhodi elula kwaye kulula ukuyichwetheza.
Halala! Indawo yakho entle iya kuvulwa ngetekhnoloji entsha.
Iibhodi ezimfutshane ezingamaqhosha e-Tool azakwenza ukuba uKhule ngokuKhawulezayo
Khetha iFavorite Shape yakho kunye nobungakanani. Sukuhlela nayiphi na ikhowudi. Cola kwiwebhusayithi yakho ukuze ubhalise.
Khuphela kwaye uncamathisele le khowudi ingezantsi kwiwebhusayithi yakho.
Umzekelo 32x32 px
Khuphela kwiKhowudi yokuKhula
Khuphela kwiKhowudi yokuPhucula
Umzekelo 64x64 px
Khuphela kwiKhowudi yeShishini
Khuphela kwiKhowudi yabaThengi
Umzekelo 128x128 px
Khuphela kwiKhowudi yaBantu
Ikopi kwikhowudi, yandisa imali
Khuphela kwiKhowudi yoPhuhliso
Ncamathisela kwiWebhusayithi yakho ukuze ufumane saMahhala kwaye Ukhule
Akukho mntu unokuyiqonda le nto ngaphandleulingelo, kuba le yiteknoloji eyahlukileyo, kwaye indlela yokusebenzisa yahlukile, aulingeloibalulekile.
Akukho mfuneko yokuBhaliswa Nxibelelana️ A+ A-
E-mail okanye Tsalela umnxeba ku +91.9356208938 ekukhuleni kwakho